Ihowuliseyili 3-tier Walk-in mini greenhouse PVC film igadi green house Intente kunye neGreenhouse | Uloyiso
50-99 Amacandelo Amacandelo ali-100-199
> = 200 Amacwecwe
$ 39.90.Ixabiso Iidola ezingama-38.90 $ 37.900
1) Powder-camera isakhelo sentsimbi, umhlwa & umhlwa ukumelana.
2) Isiciko sisebenzisa izinto zePVC ezikhuselekileyo nge-UV kunye ne-100% yokungena manzi.
3) umnyango ovahliweyo ukufikelela ngokulula kubume bendlu eluhlaza.
Inombolo yomzekelo WS-GH23
Igama lomxholo I-3-tier Walk-in kwi-mini greenhouse yePVC yendlu yegadi eluhlaza
Ubungakanani beMveliso I-69x49x193cm (L * W * H)
Izinto zokumboza Ifilimu ye-PVC ye-0.08mm
Isakhelo spec. Dia 16 * 0.4mm iityhubhu zentsimbi ngumgubo-camera camera
Ukupakisha iibhokisi Ivale ibhokisi Strong
MOQ Iziqwenga ezingama-50
Ishedyuli yegreenhouse ixhotyiswe ngamanqanaba ama-4, umphathi wenqila yokukhulisa inani elifanelekileyo leziqhamo, iintyatyambo, izityalo, imifuno, imbewu, imifuno kwindawo encinci. Igreenhouse yegadi inokukhusela izityalo kunye nezithole kwimpembelelo yemozulu kunye nemozulu. Yonwabela iintyatyambo ezintsha nezisempilweni kunye nemifuno unyaka wonke.
Ulwakhiwo olomeleleyo-Isakhelo sethu sokugcina izindlu senziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu kunye nomgubo osongelwe ukuhlala ixesha elide. Ubunzima bobunzima beshelufu nganye bufikelela kwi-12 lbs.
Igreenhouse yethu encinci iyilelwe ngomnyango wokuqengqeleka uziphu ukufikelela ngokulula kunye nokuhlola umoya ongenisa umoya ukuhambisa okungcono, okunceda ukwandisa ixesha lokukhula kwezityalo, ukukhusela izityalo kubushushu obugqithisileyo okanye ngapha nangapha, uthuli kunye nomoya. Isimbozo sefilimu se-PVC sinceda ukugcina izityalo zakho zikhuselekile ebusika kwaye sandise ixesha lokukhula kwazo.
Ukufakwa ngokulula-Akukho zixhobo zikhethekileyo ziyafuneka ukudibanisa le greenhouse incinci. Iza nazo zonke izinto ezifunekayo kunye nemiyalelo, landela nje imiyalelo kwaye uqhagamshele iintonga.
Egqithileyo Ixabiso eliphantsi le-PE Film Tunnel yezolimo
Okulandelayo: Isikhuselo soKhuseleko lwaMaxesha onke seMeko yoPhicotho lwaNgaphandle
Ukuhamba ngeTunnel Plastic Greenhouse Agriculture 3x6m